उमा आकाशसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > उमा आकाशसँग मिलेर फिल्म बनाउँदै
१५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । निर्माता तथा अभिनेत्री उमा बेबी गिरी नयाँ फिल्मको तयारीमा जुटेकी छन् । निर्देशक आकाश अधिकारीसँगको सहकार्यमा उनले नयाँ फिल्म बनाउन लागेकी हुन् । केही दिन अगाडि दुबैले सहकार्यमा ‘त्यो तिम्रो चोखो प्रेमको नजरमा’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । जसका दुबैको अभिनय देख्न सकिन्थ्यो ।
आकाससँग मिलेर बनाउन लागेको फिल्मको अहिले लेखन कार्य भैरहेको उमाले बताइन् । फिल्मको लोकेसन हेर्न कार्यसमेत भैरहेको उनको भनाई रहेको छ । फिल्म नेपाल र सिक्किममा खिचिने योजना बनेको छ ।
द स्काइ मुभिज र उमा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्मलाई आकाश स्वयंले निर्देशन गर्नेछन् । कोरोना कहरको ‘स्थिति सामान्य भएपछि फिल्म छायाँकनका लागि फ्लोरमा निस्कने तयारी हाम्रो छ’ उमाले भनिन् । फिल्ममा उमाको पनि अभिनय रहनेछ । अन्य कलाकार छनौटको क्रममा छन् ।
उमाले यसअघि ‘कहिँ कतै’, ‘इशारा’ लगायतका फिल्म निर्माण गरेकी थिइन् । निर्देशक अधिकारी पनि लकडाउनपछि अभिनेताद्वय सौगात मल्ल र शिव श्रेष्ठलाई लिएर नयाँ फिल्म बनाउने तयारीमा जुटेका थिए । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएकोले उक्त तयारी अहिले रोकिएको छ
हिमाल गय ब्वय खँ
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १३:१० bampijhyala 0
२ जेठ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । कोरोना भाइरसको दोश्रो लहरका...
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:५४ bampijhyala 0
२ जेठ, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । कवि, गीतकार, उपन्यासकार एवं...
३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार १०:५७ bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नायक भूवन केसीले निर्माण गर्ने भनिएको...
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९
सम्झनामा जेठ ३ १५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १५ बैशाख २०७८, बुधबार २०:३९